Uhlobo oluchanekileyo Inkcazo (Ulawulo)
Sayensi Scientific Method
Uluhlu oluchaziweyo Ulawulo (Ukulawula kwiNgqiqo)
Yiyiphi enye into elawulwayo kwiSigqibo?
Impendulo elawulwayo yinto enye umphandi abamba rhoqo (ukulawula) ngexesha lokulinga. Kukwaziwa nangokuthi iguquguqukayo rhoqo okanye nje "ukulawula". Ulawulo olutshintsho aluyiyo inxaxheba yolu vavanyo (kungekhona ukuzimela okanye ukuxhomekeka okuxhomekeke kuyo), kodwa kubalulekile kuba kunokuchaphazela iziphumo. Akuyinto efanayo neqela lokulawula .
Naliphi na uvavanyo olunikeziwe lunemiba ehlukeneyo yokulawula.
Kubalulekile kwenzululwazi ukuzama ukubamba zonke iziganeko eziqhubekayo ngaphandle kweenguqu ezizimeleyo. Ukuba uguquko olutshintsho luya kutshintsha ngexesha lovavanyo, lungahle lulungelelanise ukulungelelaniswa phakathi kokutshintsha okuxhomekeke kuyo. Xa kunokwenzeka, ulawulo lweendlela ezifanelekileyo kufuneka zichongwe, zilinganiswe kwaye zirekhodwe.
Imizekelo yeziTshintsho eziLawulayo
Ukushisa kukuhlobo oluqhelekileyo lokuguquguquka okulawulwayo . Ukuba ukushisa kubanjwa rhoqo ngexesha lovavanyo lilawulwa.
Eminye imizekelo yeenguqu ezilawulwayo ingaba ngumlinganiselo wokukhanya, uhlale usebenzisa uhlobo olufanayo lweglasiji, umsila wokuhlala, okanye ixesha lokulinga.
I-Mis-Spelling Common: i- variable-controled variable
Ukubaluleka kweeMpawu eziLawulayo
Nangona ukulawula okungafaniyo kunokuba kungalinganiswanga (nangona bavame ukurekhodwa), banokuba nempembelelo ebalulekileyo kwisiphumo sovavanyo. Ukungabi nolwazi malunga nolawulo oluguqukayo kunokukhokelela kwiziphumo eziphosakeleyo okanye izinto ezibizwa ngokuba "eziguquguqukayo".
Ukuphawula ukuhlukahluka kolawulo kwenza kube lula ukuvelisa uvavanyo nokuseka ubudlelwane phakathi kwezinto ezizimeleyo nezixhomekeke kuzo.
Ngokomzekelo, zithi uzama ukugqiba ukuba isichumisi esithile sinempembelelo ekukhuleni kwezityalo. Ukuhluka okuzimeleyo kukukho okanye ukungabikho kwesichumiso, ngelixa uguquko oluxhomekeke kuyo luphakamileyo lwesityalo okanye izinga lokukhula.
Ukuba awuyikulawula umlinganiselo wokukhanya (umz., Wenza inxalenye yolu vavanyo ehlotyeni kunye nengxenye ebusika), unokwenza iziphumo zakho.
I-DRY MIX Uvavanyo Iintlobo ezahlukeneyo
Izinto ze-Hypothesis efanelekileyo
6 Izinyathelo zeScientific Method
I-Scientific Method IsiGama soGunyaziso soLwazi
Yiyiphi iVavanyo yoNyaka?
Uvavanyo olulula olujongene novavanyo olulawulwayo
Uxhoba lweSilwanyana 666
Ukukhethwa kokuzikhethela: Ukuzalisa iimpawu ezinqwenelekayo
I-809 yeNdawo yoLwazi lweSikram
Yiyiphi i-Histology kwaye Yayisetyenziswa njani
Iimpawu eziqhayisayo malunga neenqanawa
Ukubhiyozela Umtshato Ngezo Quotes zoLuthando
I-Mini-Skateboards - Ziziphi i-Mini-Skatebords, I-Advantages, How-Tos, kunye nokunye
Urhulumente kaRhulumente waseBurhulumenteni Amancinci aKhethwe ngeeNkqubo eziNye
Ixabiso elipheleleyo leNqanaba lokuNzala lichaphazela njani abantu belizwe
Indlela yokwenza nokusetyenziswa kwee-Ant Baits ze-Homemade
10 Amazwi Ngomholi we-Aztec oyi-Montezuma
Iincwadi ezi-5 eziPhambili zePiano zeeNcwadi zabantwana abakhulileyo 7 no-phezulu
Yintoni iVeki VII? Ziziphi iintlobo zolucalulo lomsebenzi olwenqabelayo?
Iyintoni Inkqubo yeThermodynamic?
I-Admission College College
Elinye Iinyawo Umfanekiso Ukukhwela ukukhwela
Iingcebiso zophando kwi-Google News Archive